Hevitra · Avrily, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Hevitra · Avrily, 2017
Tantara mikasika ny Hevitra tamin'ny Avrily, 2017
Eoropa Andrefana 25 Avrily 2017
Araka ny fikarohana, dia mety ho manaiky kokoa ny zava-misy mahasarotra ny fanambin'ny tokam-po maharitra ela ny Frantsay.
Amerika Avaratra 24 Avrily 2017
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Avrily 2017
Ampian'ny sarimiaina Poloney iray nalefa tamin'ny fahitalavitra tany amin'ny taona 1970 tany ho any ireo mpanabe mba hanao ny Siansa, ny Teknolojia, ny Injenieria ary ny Matematika, izay taranja afohezina hoe STEM, ho lasa mampiala voly sy mahasarika kokoa ny ankizy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Avrily 2017
Azia Afovoany sy Kaokazy 19 Avrily 2017
Sarimiaina mampitaintaina novokarin'i Tatiana Zelenskaïa no mitantara amintsika ny tantaran'ireo vehivavy dimy nalaina an-keriny, fiainana kirghizy dimy.
Ny Tendrombohitra Amin'ny Endrika Hafa: ‘Ski Challenge’ Ao Afghanistan
Azia Afovoany sy Kaokazy 18 Avrily 2017
Raha te hanao ski ao Afghanistan ianao, Bamyan no toerana tsara.
Ny Fivoaran'ny #Instameet ao Sri Lanka
Azia Atsimo 18 Avrily 2017
Tao an-tanànan'i Negombo ao Sri Lanka no natao ny fihaonana fahadimin'ireo mpampiasa Instagram. Fiovàna goavana avy amin'ireo teo aloha ny fikisahana nampiasa fakantsary fa tsy finday avo lenta.